DataNumen Exchange Recovery - ယှဉ်ပြိုင်မှုနှိုင်းယှဉ်
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Exchange Recovery ယှဉ်ပြိုင်မှုနှိုင်းယှဉ်
DataNumen Exchange Recovery နှိုင်းယှဉ်မှု
DataNumen Exchange Recovery အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး OST PST converter ကိုရန်နှင့် OST ကမ္ဘာပေါ်မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ Microsoft Exchange ဆာဗာတွင်ဆာဗာချို့ယွင်းမှုများ၊ ဆာဗာဒေတာဘေ့စ်ပျက်စီးခြင်းစသည့်ပြdisasterနာများဖြစ်ပွားသောအခါ၊ DataNumen Exchange Recovery (သို့) အော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုလဲလှယ်သောအော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွဲကိုစကင်ဖတ်ရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။ostclient client ရှိဖိုင်များ၊ စာတိုမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သင်၏ Exchange အကောင့်၏အခြားအရာများကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူပြီးလွယ်ကူစွာရယူရန် Outlook pst ဖိုင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းပါ။
မှတ်စု: Outlook PST ဖိုင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုပါ DataNumen Outlook Repair.
DataNumen Exchange Recovery ယှဉ်ပြိုင်မှုနှိုင်းယှဉ်
မှတ်စု: Most စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ဒေတာဖိုင်များ၏ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးမားသောဖိုင်အချို့အတွက်၎င်းကိုသင်ရရှိနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ပါ.
scanpst (Outlook 2007 အတွက်)
များအတွက် Kernel ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေး OST 7.05.01
Outlook 1.3.17.51 ​​အတွက် Recovery ToolBox
ကြယ် Phoenix စာပို့စက်လဲလှယ်ရေး Desktop ၄.၅
Outlook 3.0 အတွက်ပြန်လည်ရယူခြင်း
DiskInternals Outlook Recovery ၂.၂
OST၂ ပေ ၂.၁
အတွက်ဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူပါ OST PST 3.10.1 ရန်
ပျမ်းမျှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုနှုန်း * 96.78% 7.72% 0.67% 0.33% 4.61% 4.56% 4.56% 51.81% 0.00% 0.00%
(5MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.00% 0.00% 0.00%
(50MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00%
(100MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70% 0.00% 0.00%
(500MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.60% 0.00% 0.00%
(1GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
(2GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.80% 0.00% 0.00%
(4GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) အပိုင်း 1 အပိုင်း2100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
(8GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) အပိုင်း 1 အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4အပိုင်း5100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.00% 0.00% 0.00%
(10GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) အပိုင်း 1 အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4အပိုင်း5100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.60% 0.00% 0.00%
(15GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) အပိုင်း 1 အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4အပိုင်း5အပိုင်း6အပိုင်း7အပိုင်း 8 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.20% 0.00% 0.00%
(5MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.80% 0.00% 0.00%
(50MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.90% 0.00% 0.00%
(100MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.40% 0.00% 0.00%
(500MB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.70% 0.00% 0.00%
(1GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
(2GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်)
(4GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) အပိုင်း 1 အပိုင်း2100.00% 97.00% 0.00% 0.00% 42.00% 41.00% 41.00% 41.10% 0.00% 0.00%
(4GB အကျင့်ပျက်ခြစားမှု OST ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်) အပိုင်း 1 အပိုင်း296.00% 96.00% 66.00% 60.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.10% 0.00% 0.00%
32bit Windows ၏မူကွဲအားလုံး 98 / ME မထောက်ပံ့ 98 / ဆာဗာ 2008 မထောက်ပံ့ 98 / ME မထောက်ပံ့ 98 / ME / 2000 မထောက်ပံ့ 98 / ME မထောက်ပံ့ Vista ကိုမထောက်ခံပါ 98 / ME မထောက်ပံ့
64bit Windows ၏မူကွဲအားလုံး ဆာဗာ 2008 မထောက်ပံ့ Vista ကိုမထောက်ခံပါ
Outlook နှင့် OST/ PST အမျိုးအစားပံ့ပိုးမှု
Outlook 97-2002 Non-Unicode အမျိုးအစား OST
Outlook 2003-2010 Unicode အမျိုးအစား OST
အသုံးပြုသူသည် PST ဖိုင်ကိုယူနီကုတ်မဟုတ်သောပုံစံသို့မဟုတ်ယူနီကုဒ်ပုံစံဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်
Non-Unicode format ကိုပြောင်းပါ OST Unicode format ကို PST ရန်
ယူနီကုဒ်ပုံစံပြောင်းပါ OST Non-Unicode အမျိုးအစား PST ရန်
အကြီးစား OST ဖိုင်ပံ့ပိုးမှု
ဖြေရှင်း ကြီးမားသော 2GB OST ဖိုင်ပြproblemနာ ဒေတာဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ
ထောက်ပံ့ OST 16777216 တီဘီအဖြစ်ကြီးမားသောဖိုင်များ
ကြီးမားသောကွဲ OST အများအပြားသေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေသို့ဖိုင်
အရာဝတ္ထု Recovering အတွက်စွမ်းရည်
ထဲမှာအရာဝတ္ထုအမျိုးအစားအားလုံးကိုပြန်လည်ဆယ်ယူပါ OST မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊osts, ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်များ, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များကို, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ
အကြောင်းအရာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျကိုယ်ထည်၊ စသည်တို့မှအရာဝတ္ထုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူပါ။ cc / bcc ကိုမထောက်ပံ့ပါ cc / bcc ကိုမထောက်ပံ့ပါ bcc / ရက်စွဲကိုမထောက်ခံ ဘာသာရပ် / cc / BCC မထောက်ပံ့ cc / bcc ကိုမထောက်ပံ့ပါ
ရိုးရိုးစာသား၊ RTF နှင့် HTML ပုံစံများဖြင့်မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်လည်ရယူပါ
မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် HTML ကိုယ်ထည်တွင်ထည့်သွင်းထားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံများအပါအဝင်ပူးတွဲဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူပါ
ထည့်သွင်းထားသောအရာဝတ္ထုများကဲ့သို့သောအခြားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ Excel Worksheets, Word စာရွက်စာတမ်းများစသ ထည့်သွင်းထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမထောက်ခံပါ ထည့်သွင်းထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမထောက်ခံပါ ထည့်သွင်းထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမထောက်ခံပါ
မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊osts, ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်များ, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များကို, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ
Recover OST floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်ပြန်လည်ထူထောင် OST ဖိုင်တွေ
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု OST ဖိုင်တွဲများကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်
Windows Explorer အကြောင်းအရာမီနူးကိုထောက်ပံ့ပါ
ဆွဲ & drop စစ်ဆင်ရေးကိုထောကျပံ့
Support command line (DOS prompt) parameters များကိုထောက်ပံ့သည်